28 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 28 Novemba 2021
21 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 21 Novemba 2021
I-Bitcoin Bulls izama ukubamba amaxabiso njenge-BTC Options Expiry Approaches
Kwiveki ephelileyo, Bitcoin (BTC) iinkunzi zaba inzuzo $715 yezigidi inzuzo ngoNovemba 12 iinketho ukuphelelwa, ngexabiso ngasentla $68,000. Ngeenketho ezininzi zokufowuna (ukuthenga) ezimiselwe ukuphelelwa ngoNovemba 19, le nzuzo iye yaguquka ngokuthanda iibhere ukususela kwingozi yakutshanje ukuya kwindawo ye-59,000 yeedola.
Iibhere zithathe umbulelo ophambili ekuveleni kweziganeko ezimbini ezingathandekiyo zeBitcoin kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. NgoLwesihlanu odlulileyo, iKhomishini yezoKhuseleko kunye noTshintshiselwano yase-US yala isicelo se-VanEck se-Bitcoin ETF, ichaza ukhuseleko lomtyali njengesizathu sayo.
Ngeli xesha, ngoMvulo, uMongameli wase-US uJoe Biden ugunyazise umthetho oyilwayo osanda kupasiswa, ogunyazisa ukuba iintengiselwano zedijithali ezixabisa ngaphezulu kwe-10,000 yeedola ukuba zixelwe kwiNkonzo yeNgeniso yaNgaphakathi, ukusukela ngo-2024.
Oko kuthethiweyo, iinkunzi zenkomo zingazisola ngokungathathi ukubheja okungaphezulu kwi-1.1 yeebhiliyoni zeedola kwiinketho zeveki zokuphelelwa lixesha. Ekuphela kwendlela iinkunzi ezinokuthi ziyijike le nto kukutyhala ixabiso leBitcoin ngaphezulu kwe-64,000 yeedola, okanye i-7.5% ukusuka kwindawo ekuyo ngoku, phambi komhla wokuphelelwa.
Nangona kunjalo, iibhere zikwajolise ekukhupheni uxinzelelo olungaphezulu kunye nokugcina ixabiso lisondele kuphawu lwe-58,000 yeedola, ezinokuvelisa i-220 yezigidi zeerandi kwinzuzo yokubeka (ukuthengisa) ukhetho.
Ngoluvo lwemarike yangoku, kuhlala kunqabile ukuba iinkunzi zenkomo zitsale i-7.5% yeheist kwiibhere ngaphambi kwangomso.
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-18 kaNovemba
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, i-BTC ikumqolo onzima we-bearish njengoko iinkunzi zenkomo zizama ukugcina ixabiso elingaphezu kwe-59,000 yeedola. Okubangela umdla kukuba, i-benchmark cryptocurrency ngoku irhweba ngaphakathi kwetshaneli ehlayo kwaye iphumla ngaphezulu kwesiseko sesi salathisi sobugcisa. Esi siseko sihambelana nenkxaso ye-59,000 yeedola ebonisa ukuba iinkunzi zenkomo kufuneka ziphumelele ekukhuseleni eli nqanaba.
Ukongezelela, isalathisi sam se-MACD seyure ye-4 sibonisa ukuba ixabiso lingangqina ukuphindaphinda ngokukhawuleza njengoko livela kwiimeko ze-bearish. Oko kwathiwa, kunye nesalathisi se-BTC yokoyika kunye nokubawa kwiimeko ezingathathi hlangothi, ndilindele ukuphindaphinda okuzinzileyo ukuya kwi-$ 63,000 kwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-61,000 yeedola, i-61,785 yeedola, kunye ne-63,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$59,000, i-$58,000, kunye ne-$57,500.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.12 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 43.2%
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin: I-BTC Dips Ngezantsi kwe-60,000 yeedola phakathi kokuThatha iNzuzo enkulu
Bitcoin (BTC) ihlupheke > 8% crash ngoLwesibini, nangona ngaphambili ukurekhoda ukuphuculwa kwenethiwekhi okuyimpumelelo. I-cryptocurrency ephambili isezantsi kwi-59,000 yeedola ephantsi ngaphambili namhlanje, ngokufanelekileyo ukucima zonke iinzuzo ezirekhodiweyo ngoNovemba. Ukongezelela, i-BTC iye yehla nge-11.75% kwiintsuku ezisixhenxe zokugqibela ukusuka kwirekhodi eliphezulu le-69,000 yeedola ngoNovemba 10.
Ngeli xesha, i-altcoin enkulu yehlabathi i-Ethereum nayo ilahlekelwe kakhulu namhlanje kwaye yehle nge-11.8% ukuya kwi-4,200 yeedola.
Abahlalutyi abaninzi bavakalise ukudideka kwabo njengoko kubonakala ngathi akukho ndaba ziqhuba ukwehla. Nangona kunjalo, ukulungiswa kwe-bearish kubonakala kuphuma ekuthatheni inzuzo kuyo yonke imarike, kulandela i-rally yenkunzi yamva nje.
Ethetha ngophuhliso olwenzekayo, igosa eliyintloko lokusebenza kwi-Stack Funds ese-Singapore uMatthew Dibb uthe:
"Kukho ukunqongophala kweendaba, kwaye oku kukuthengisa okucocekileyo kwendawo kunye nokongezwa kokuthengisa okufutshane. Ngaphandle koku, akukho ndaba zibalulekileyo. ”
Okubangel 'umdla kukuba, i-Bitcoin iphinde yaphinda kabini ixabiso layo ukususela ngoJuni, ngenxa yolwamkelo oluqhelekileyo lwe-cryptos kunye nokuqaliswa kwamva nje kweengxowa-mali ezisekelwe kwi-BTC zotshintshiselwano (ETFs) e-US.
Kwakhona, inethiwekhi yeBitcoin irekhode ukuphuculwa okubalulekileyo, okubizwa ngokuba yiTaproot, ngeCawa ephelileyo. Uphuculo luvumela uthungelwano ukuba luququzelele kwaye luqhube ukuthengiselana okuyinkimbinkimbi, ngaloo ndlela kwandisa iimeko zokusetyenziswa kwe-BTC kunye nokwenza ukhuphiswano oluncinci kunye ne-Ethereum kunye nezinye iibhloko ze-Smart Contract-processing.
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-16 kaNovemba
I-Bitcoin yenza i-U-turn ebukhali iqala izolo ukusuka kwi-66,340 yeedola ukuya kwi-64,000 yeedola - i-$ 63,000 yendawo ye-pivot. Ukuqwalasela amandla embali yale ndawo yenkxaso, ndilindele ukubona ukuphindaphinda kwi-64,900 ye-$ .
Nangona kunjalo, iibhere zazinezinye izicwangciso kwaye zaqhuba amaxabiso aphantsi kakhulu ngexesha elifutshane. Nangona uxinzelelo lwe-bearish luye lwancipha ngoku, ndilindele ukubona ukuqhubela phambili kwindawo ye-58,000 yeedola elandelwa yi-slow and steady bullish retrace ukuya kwindawo ye-pivot ye-$ 63,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.61 zezigidi
I-Bitcoin Falls ukuya kwi-63,000 yeedola Ukulandela ukwaliwa kwe-ETF ye-VanEck ye-BTC
14 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 14 Novemba 2021
IKomishoni yezoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwase-United States (SEC) iye, kwakhona, yala indawo Bitcoin (BTC) ingxowa-mali yotshintshiselwano (ETF) enikezelwe nguVanEck. Esi sigqibo siza emva kweeveki ezimbalwa zokuvunyelwa ukulibaziseka kwimveliso yi-SEC.
I-VanEck ibonise iindawo ezininzi ze-ETF ze-BTC kwi-watchdog kule minyaka idlulileyo kodwa ayizange iphumelele ekufumaneni imvume yabo.
Oku kuza emva kokuba i-SEC ivume ii-ETF ezimbini zeBitcoin ezixhaswe kwixesha elizayo ngo-Okthobha, enye yazo yayiyi-ETF yeQhinga leVanEck. Ukulandela le mvume, ababukeli abaninzi bakholelwa ukuba iKomishoni iye yavuleleka ngakumbi kwi-BTC ETF. Nangona kunjalo, oku akuzange kube njalo.
I-SEC yalahla ukufakwa kweVanEck ETF ngoLwesihlanu odlulileyo kwaye yazisa ukuba ayinakudwelisa izabelo zayo kwi-CBOE BZX Exchange.
Uxwebhu olusemthethweni oluvela kumlawuli wezezimali lufundeka ngolu hlobo:
“Lo myalelo awuhambisani notshintsho lomthetho olucetywayo. IKomishoni igqiba ukuba i-BZX ayizange ihlangabezane nomthwalo wayo phantsi koMthetho woTshintsho. "
Kwakhona, iKomishoni yaqaphela ukuba i-BZX kunye noVanEck abazange baphumelele ukujongana nayo nayiphi na imiqobo yangaphambili ethintela ukuvunywa kwee-ETF ezindala, beqaphela ukuba “eyenzelwe ukuthintela izenzo zobuqhophololo nezenzo zobuqhophololo” kwaye "ukukhusela abatyali-mali kunye nomdla woluntu."
Okwangoku, uSihlalo we-SEC uGary Gensler kutshanje uye waphawula ukuba i-ETF esekelwe kwixesha elizayo iyindlela ekhuselekileyo kubatyalo-mali, esongeza ukuba kungenxa yoko kuphela iimali ezinjalo ziye zafumana imvume e-US.
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-14 kaNovemba
I-BTC iphinde yafumana ithowuni ye-bullish epholileyo ngeCawa ilandela ukuhla ukuya kwi-pivot ye-$ 63,000 kwindawo ye-VanEck indawo ye-BTC ETF yokwaliwa yi-SEC. I-benchmark cryptocurrency ngoku iqinisekisa inqanaba le-63,000 yeedola njengesiseko sendlela yangoku njengoko iinkunzi zilungiselela ukuqhuba ixabiso ngokukhawuleza.
I-BTC iphinde igqibe ukubuyiswa okupheleleyo ukusuka ngasentla kwe-1192.23 (iimeko ezithengisiweyo) kwitshathi yam ye-MACD yeeyure ezi-4, iqinisekisa ngakumbi ukuba kunokwenzeka ukuba kubekho ukunyuka okubukhali kwixesha elisondeleyo. Oko kuthethiweyo, i-benchmark cryptocurrency yethu idinga ukuvala ikhandlela ngaphezulu kwe-65,000 yeedola ukukhaba enye inkunzi yenkomo.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-65,000 yeedola, i-66,000 yeedola, kunye ne-67,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$64,000, i-$63,000, kunye ne-$62,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.83 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.21 zezigidi
I-Bitcoin iphazamiseka ukuya kwiiNtsuku ezintathu eziPhantsi emva kokuSebenzisa iAkhawunti ye-Whale yeMinyaka eSibhozo
Izolo, ilityelwe Bitcoin (BTC) Isipaji somnenga esiye sahlala sithe cwaka iminyaka engaphezu kwesibhozo sarekhoda imisebenzi okokuqala ngqa ukusukela ekudalweni kwayo.
Ngokutsho kwe-Btcparser.com, i-akhawunti ye-behemoth ichithe i-2,207 BTC, ixabisa i-$ 147 yezigidi (isebenzisa i-$ 69,000).
Idilesi, eyenziwe ngoJulayi 10, 2013, iqulethe i-2,207.6 BTC iyonke kwaye yahambisa yonke into yokubamba kwiipaji ezimbini. I-transaction yokuqala yathumela i-300 BTC, ngelixa okwesibini yathumela i-1,908.5997 BTC. Iimali ezishiyekileyo zisetyenziselwe ukuzalisekisa iintlawulo zentengiselwano.
I-Blockchair, isebenzisa i-privacy-o-meter yayo, ibonise ukuba i-transaction irekhode amanqaku e-45, amanqaku abucala abucala ngokwe-metric. Umboneleli wohlalutyo uphinde wagxininisa ubuthathaka obuthathu kwintengiselwano yomnenga, kwaye enye yazo ibandakanya iidilesi ezihambelanayo.
Oko kwathiwa, umsebenzi womnenga izolo ulandela ipateni efanayo kwenye intengiso yomnenga kutshanje. Intengiselwano yomnenga yayingama-20 eminyaka ubudala imivuzo ukusuka ngo-2010 kwaye ichithwe izolo. I-Blockchair yangasese-o-meter ibonise ukuba ukuthengiselana kubhalwe a "kubaluleke kakhulu" amanqaku abucala kwaye amanqaku anoziro. Le ntengiselwano ikwanengxaki yobuthathaka obuhlanu babucala.
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-11 kaNovemba
I-BTC ifumene ingozi enkulu izolo, mhlawumbi ngenxa yomsebenzi womnenga okhankanywe ngaphambili, njengoko i-cryptocurrency ye-benchmark yehla ukusuka kwixesha layo lonke eliphezulu le-$ 69,000 ukuya kwi-63,000 yeedola kwiiyure ezimbalwa.
Nangona kunjalo, le ngozi engazange ibonwe ngaphambili izise ulungiso olufunekayo njengoko yakhulula i-BTC kwiimeko ezigqithisiweyo kwisalathisi sam se-MACD seeyure ezi-4. Oko kwathiwa, ukubuyiswa kwe-bullish ngaphezu komgca we-66,000 yeedola kufuneka kuncede i-BTC ibuyisele ukuzithemba kwaye ikhulise ixabiso eliphezulu.
Nangona kunjalo, ukubakho kwe-bearish retest ye-63,000 ephantsi ye-$ kusekho, kwaye kuphela ukuvala ngaphezu kwe-$ 65,000 - i-$ 66,000 yendawo inokuthintela oku kuwa.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-66,000 yeedola, i-67,000 yeedola, kunye ne-68,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$65,000, i-$64,000, kunye ne-$63,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.85 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.22 zezigidi
I-Bitcoin kufuneka ifundiswe eziKolweni: Usodolophu weSixeko saseNew York
Usodolophu weSixeko saseNew York u-Eric Adams usanda kuchaza isigqibo sakhe ufumana intlawulo yakhe yokuqala emithathu in Bitcoin (BTC) kwaye wenze i-NYC i "Iziko lezinto ezintsha kunye ne-cryptocurrency" kudliwanondlebe neCNN Business Sunday.
Umamkeli-ndwendwe wabuza uAdams ukuba yena "Ngaba ungawakhuthaza amashishini kwisiXeko saseNew York ukuba amkele i-bitcoin okanye ezinye ii-cryptocurrencies?" Uye waphawula ukuba: “Siza kuyijonga. Siza kunyathela ngononophelo. Siza kuyilungisa. ” Usodolophu onyuliweyo wongeze wathi:
“Ndifuna ukuthumela umqondiso. Esi sixeko yayiyi-Empire State … Eli liziko lezinto ezintsha, iimoto eziziqhubayo, uphuhliso lwedrone, ukhuseleko lwe-cybersecurity, isayensi yobomi. Ngoko xa ndithetha nge-blockchain kunye ne-bitcoin, abantu abaselula esitratweni bayeka baze bandibuze: 'Yintoni leyo? Imalunga nantoni?'”
Umninimzi kamva wabuza uAdams ukuba achaze ukuba yintoni i-Bitcoin, apho waphendula wathi:
“Yimali ye-crypto. Yindlela entsha yokuhlawulela iimpahla kunye neenkonzo kwihlabathi liphela. Nantso ke into ekufuneka siyenze: ukuvula izikolo zethu ukuze sifundise itekhnoloji kwaye sifundise le ndlela intsha yokucinga xa kuhlawulwa iimpahla neenkonzo. ”
NgoJuni, uAdams wathi: “Kunyaka omnye, unyaka omnye, uza kubona isixeko esahlukileyo … siza kuzisa amashishini apha. Siza kuba liziko lesayensi yobomi, iziko le-cybersecurity, iziko leemoto eziziqhubayo, iidrones, iziko leebitcoins. Siza kuba liziko labo bonke ubuchwepheshe. "
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-9 kaNovemba
I-BTC iye yacima elinye ixesha eliphakamileyo emva kokuchukumisa i-68,534 yeedola eziphezulu ngaphambili namhlanje. Nangona kunjalo, i-benchmark cryptocurrency ithumele ukulungiswa okuncinci kwinqanaba elingaphantsi kwe-$ 67,000 njengoko iimeko zokurhweba ziwela kwiimeko ezigqithisiweyo.
Oko kwathiwa, ndisalindele ukubona enye i-bullish push ukuya kwi-69,000 yerekhodi ephezulu kwixesha elisondeleyo ngaphambi kokubona ukulungiswa okugcweleyo okunokwenzeka kwi-65,000 - $ 64,000 yengingqi.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-68,000 yeedola, i-68,500 yeedola, kunye ne-69,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$67,000, i-$66,000, kunye ne-$65,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.95 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.28 zezigidi
I-Bitcoin Iyanyuka njengoko ooSodolophu baseMelika babhengeza iziCwangciso zokufumana iiPaychecks kwi-BTC
7 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 7 Novemba 2021
Bayanda oosodolophu base-US babonise umdla wokufumana imivuzo yabo Bitcoin (BTC). Ngexesha lokushicilela, ubuncinci oosodolophu abathathu kunye nosodolophu omnye okhethiweyo bavumile ukuqokelela iintlawulo zabo ezilandelayo kwi-BTC.
Usodolophu wokuqala ukwenza lo mgca ngusodolophu waseMiami, eFlorida, uFrancis Suarez, obhale kuTwitter ngoLwesibini odlulileyo esithi:
"Ndiza kuthatha i-paycheck yam elandelayo i-100% kwi-Bitcoin."
Kungekudala emva koko, usodolophu onyulwe kwisiXeko saseNew York u-Eric Adams waphendula kwi-tweet kasodolophu uSuarez, ephawula ukuba uya kuthatha iintlawulo zakhe ezintathu zokuqala kwi-BTC xa ephinda eqala ukusebenza njengosodolophu we-NYC.
U-Suarez weza kwakhona ngodliwano-ndlebe kunye neFox Business, eqaphela ukuba akayi kuthatha umvuzo wakhe kuphela kwi-BTC kodwa umvuzo wakhe wonke. Usodolophu waseMiami uveze ukuba iCIO yesixeko "Yayingumsebenzi wokuqala ukuthatha ipesenti yomvuzo wakhe kwi-bitcoin," ukongeza oko "Ndiza kuba ngumqeshwa wesibini ... ndiza kuthatha i-100% yomvuzo wam kwi-bitcoin."
Nangona kunjalo, uSuarez wacacisa ukuba: "Ngokuqinisekileyo asizukuyinyanzela nakubani na." Usodolophu wongeze wathi: “Iya kuba yinto yokuzikhethela ngokupheleleyo … sifuna abasebenzi bethu babe nolo khetho, kodwa ngokuqinisekileyo ayizukuba yinto esiza kubanyanzela ngayo, siqonde ukuba isigqibo esilolo hlobo sisigqibo sobuqu ekufuneka besenze ukuba bayafuna. ukuyenza.”
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-7 kaNovemba
I-BTC iyaqhubeka nokurhweba kunye ne-trendline yam yokuhla yeentsuku ezilishumi elinesibhozo, emva kokugatya okubukhali kwi-64,000 yeedola. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency ye-flagship irekhode i-rebound ehloniphekileyo ukususela ekulungisweni kwenkxaso yengqondo ye-60,000 yeedola kwaye ijolise ekubuyiseleni indawo ye-63,000 yeedola.
Oko kwathiwa, iinkunzi zenkomo kufuneka zibambe ngaphezulu kwe-61,785 ye-4 ye-juncture ebalulekileyo (ixhaswe yi-50-iyure ye-XNUMX ye-SMA) ukugcina isantya se-bullish yangoku. Ukuvela kwakhona kwe-bullish kubonakala ngathi kuya kwenzeka kwixesha elisondeleyo, njengoko isalathisi sam se-MACD siphuma kwakhona kwiimeko ze-bearish.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-62,000 yeedola, i-63,000 yeedola, kunye ne-64,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$61,000, i-$60,000, kunye ne-$59,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.76 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.17 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 42.4%
← Entsha izithuba1 2 ... 26 abaDala izithuba →